घर अमेरिकी फुटबल स्टोरीहरू उरुग्वे फुटबल खेलाडीहरू रोनाल्ड Araujo बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड बायोग्राफी तथ्य
हाम्रो रोनाल्ड अराउजो बायोग्राफीले तपाईंलाई उनको बाल्यावस्थाको कहानी, प्रारम्भिक जीवन, परिवार, अभिभावक, प्रेमिका / पत्नी हुनु, जीवनशैली, व्यक्तिगत जीवन र नेट वर्थका बारे तथ्यहरू बताउँदछ।
सरल भाषामा भन्नुपर्दा हामी तपाईंलाई उरुग्वे फुटबलर रिवेरा मूलको इतिहास दिन्छौं। LifeBogger आफ्नो प्रारम्भिक वर्षहरुबाट शुरू हुन्छ, जब उनी प्रसिद्ध बने लियोनेल मेसी बार्सिलोना रोनाल्ड अराउजियोको बायोको आकर्षक प्रकृतिमा तपाईंको आत्मकथा स्वाद कलियाहरूमा टेक्नको लागि, यहाँ उनको जीवनको चित्रण सारांश छ।
रोनाल्ड अराउजोको इतिहास।
हो, सबैलाई थाहा छ कि बार्का धेरै लामो समयसम्म औसत खेलाडीसँग टाँसिदैन। कुनै आश्चर्य छैन क्याटालान्सले रोनाल्ड अराउजोको सम्झौता जून २०२2026 सम्म विस्तार गर्ने लक्ष्य राख्यो। यसले देखाउँदछ कि ऊ साधारण डिफेन्डर छैन।
प्रतिभाशाली केन्द्रलाई फिर्ता दिइएको प्रशंसकको बाबजुद पनि, हामी जान्दछौं कि कम प्रशंसकहरूले उनको जीवन कहानीको एक संक्षिप्त संस्करणको उपयोग गरेका छन्। हामीले यसलाई प्रेमको लागि तयार गरेका छौं। अब थप विज्ञापन बिना, सुरु गरौं।
रोनाल्ड अराउजो बाल्यकाल कहानी:
जीवनी सुरुवातीहरूको लागि, डिफेन्डर पूर्ण नामहरू राख्छ; रोनाल्ड फेडरिको अरौजो दा सिल्भा। जे होस्, धेरै खेल प्रेमिका उहाँलाई "भैंस" उपनामबाट चिन्छन्। उनको जन्म मार्च १71999। को XNUMXth तारिखमा उरुग्वे माता-पिताको लागि देशको सीमा शहर रिवेरामा भएको थियो।
यस केन्द्रमा फिर्ता बुबा र आमा बीचको मिलनबाट जन्मेका तीन बच्चाहरु मध्ये सब भन्दा जेठो हो। जब उनी आफ्नो बुबाको नम्र स्वभावको पछि लाग्छन्, रोनाल्डले आफ्नो आमाको सुन्दर मुस्कान पाएका छन्।
तपाईं आफ्नो बुबा मा रोनाल्ड अराजेको अनुहार देख्न सक्नुहुन्छ। कानबाट कानमा उसको आमाको मुस्कान अनमोल छ।
एउटा सानो बच्चाको रूपमा, जवान रोनाल्डले आफ्नो अधिकांश समय आफ्ना आमाबुबाको आराममा बिताउँथे। उहाँ र उनका भाइबहिनी उहाँकी आमासँगै बस्नुभयो किनकि बुबा कामबाट टाढा पुग्नुभयो। आफ्नो बुबाआमाको जेठो सन्तानको रूपमा, उहाँ अलि लामो पर्खनुभयो - आफ्नो सानो भाई, माइकलको जन्म सम्म।
रोनाल्ड अराउजो परिवार पृष्ठभूमि:
हरेक खेलाडीले सेन्टर-ब्याकमा जस्तो मेहनती अभिभावकलाई आशिष्‌ दिदैन। जबकि अराजोका बुबा उनका मध्यम-वर्ग परिवारको आवश्यकताहरू पूरा गर्ने दिशामा प्रयासरत छन्, उनको आमालाई छोडिएन। उनले पतिको प्रयासलाई समर्थन गर्न हुरकान (स्थानीय एकेडेमी) मा फ्राइड केक बेचे।
रोनाल्ड अराउजो परिवार उत्पत्ति:
आफ्नो विस्फोटकारी क्यारियर सफलता संग, उरुग्वे उनीहरुलाई उनीहरु मध्ये एक को रुपमा पहिचान गर्नमा गर्व छ। विकिपेडियाले भनेजस्तै, उसको पहिलो वा पैतृक थर अरजो हो जबकि उसको दोस्रो वा मातृ परिवारको नाम दा सिल्भा हो।
अझ, उहाँको गृहनगर - रिवेराको मन्डुबी नजिकैको स्थान - जन्मस्थलबाट केही किलोमिटर मात्र पर छ Luis Suarez, एक मानिस उसले एक ठूलो भाइ मान्दछ। अनुसन्धानका अनुसार अराउजोले आफ्नो मातृ पुर्खाहरूको माध्यमबाट ब्राजिलियन परिवारको जराको ट्रेस पाए।
रिवेराले ब्राजिलको एक शहर सान्ताना डो लिभ्रेमेन्टोसँग खुला शुष्क सीमा साझा गर्दछ।
छ वर्षको उमेरमा, रोनाल्डले सार्वजनिक स्कुल पढाइ गरे जुन नि: शुल्क छ। फुटबलको बढ्दो जोश र प्रो बन्ने तीव्र चाहनासहित, उनले शैक्षिक अध्ययनलाई बेवास्ता गरे। सुरुमा, त्यहाँ एक सन्तुलित कला थियो तर फुटबलको चाहनाले यसलाई मार्यो।
रोनाल्ड अराउजो अनटोल्ड फुटबल कहानी:
भाग्यमा यो छ कि डिफेन्डर एकेडेमीमा भर्ना भयो जहाँ उसकी आमाले फ्राइड केकहरू बेच्छे - डोनट्स पनि भनिन्छ। उसको बच्चा फुटबल स्कूलको कार्यस्थलमा बच्चाहरूको प्रदर्शनले सुपर आमालाई ताजा बनायो। यो उनले एकेडेमी मा आफ्नो छोराको नामांकन स्वीकृत गर्न आफ्नो पति को ध्यान खोजेको देखे।
उनको बिक्री पूरा गरिसकेपछि रोनाल्डकी आमा घरमा उसलाई डिरेक्टरको बुबासँग भर्ना गर्ने बारेमा छलफल गर्न घर भागे। धन्यबाद, अराउजोका अभिभावक दुबै उनीसँग उनको फुटबल प्रतिभा बढाउन मद्दत गर्न सहमत भए। उनीहरूको बच्चा उनको गृहनगर क्लबमा सामेल हुनको लागि थियो; Huracan de Rivera, जहाँ उसकी आमाले फ्राइड केक बेच्यो।
रोनाल्डको अभियान जस्तै छ मास्चेरानो प्रेरित पौराणिक कथा, Carles Puyol र धेरै अन्य डिफेन्डरहरू जसले अगाडि बढि शुरुआत गरे। धेरै जसलाई उहाँलाई चिन्थे, त्यहाँ कुनै श absolutely्का थिएन कि ऊ भविष्यमा सफल हुनेछैन। उनले कथन ल्याए जब उनले आफ्नो एकेडेमीलाई एक प्रमुख ट्रफी जितेका थिए।
रोनाल्ड अराउजोको बचपनको फोटो जब उनी ट्रफी जितेर मनाउँछन्।
निराशाजनक प्रारम्भिक क्यारियर जीवन:
किशोरावस्थामा जानुभन्दा पहिले, एक दृढ संकल्पित रोनाल्ड अराउजो आफ्नो देशको राजधानी मोन्टेभिडियोमा ठूला मुद्दाको लागि बाहिर निस्किए। तपाईं, प्रविष्टि प्राप्त गर्न को लागी एक प्रयास (उमेर 9) एट्लिटिको पेआरोलमा असफल। टुक्रिएको मुटुको साथ, त्यो गरीब केटो रिवेरामा उसको परिवारको गृहनगर फर्कियो।
घर फर्कदै, रोनाल्ड अराउजो स्थानीय टोलीहरूको लागि खेलिरहे। उदास र कडा कडा सानो देखिदै, त्यस युवा फिर्ता फिर्ता, उहाँ एक असफल फुटबलर हुन को लागी एक कल मात्र थियो लाग्यो।
त्यसपछिको दस बर्षसम्म लगनशीलताले उनलाई आफ्नो खेलको शैलीलाई अगाडि बढेको देख्यो। अराउजो पहिलो पटक आक्रमणबाट मिडफील्डमा सरे। कहिल्यै हार नमान्ने प्रतिबद्धताले उनलाई फेरि उरुग्वेको राजधानीमा ट्रायलका लागि अगाडि बढेको देख्यो - यसपटक उनले एट्लटिको रोन्टिनास्टस (२०१ 2016 मा) संग सफलताको मजा लिइरहेका थिए।
रोनाल्ड अराउजो जीवनी - ख्याति कथाको लागि मार्ग:
आफ्नो नयाँ टीममा, रोनाल्डले सर्जियो क्याब्रेरालाई भेट्टाए - बुबा फिगर म्यानेजर जसले उनलाई एक पेशेवर पदार्पण गरे। कोचले याद गरे कि १ 16 बर्षे उमेर एक डिफेंडरको लागि उचाई र शक्ति थियो। कुनै समय मा, उनले उसलाई केन्द्रको रूपमा फिर्ता पाउन सान्त्वना दिए।
अराजोको बचाव प्रवर्धन आकर्षित भयो क्लब एटलिक बोस्टन नदी जसले उनलाई जुलाई २०१ 28 को २th औं दिनमा हस्ताक्षर गर्नुभयो। उरुग्वेको उच्चतम प्रो फुटबल लीगमा सबैभन्दा कान्छो सर्वश्रेष्ठ डिफेन्डर बन्नेले एफसी बार्सिलोना स्काउट्सलाई आकर्षित गर्‍यो। यूरोपीयन आगन्तुकहरु उनको क्षमताहरु मा यति विश्वास थियो र उनी स्पेनिश विशाल मा हस्ताक्षर गरे।
उनका आमा बुबा र परिवारका सदस्यहरूलाई युरोप छोड्नु पर्ने साहस पाउनु नै त्यो सबैभन्दा कठिन चीज थियो। अगाडि आउने चुनौतीहरूका कारण रोनाल्डले साहस बोलायो जब उनले आफ्नो स्थान सिमेन्टि and गर्न र बार्सिलोनाको बी पक्षमा राम्रो जीवन बिताउन केन्द्रित हुन थाले।
उनी चाँडै ब्ल्याग्राणाको सब भन्दा अमूल्य सम्पत्ति भए, बार्का बीमा उनको १०० मिलियन डलर र यदि उनी पहिलो टोलीमा पुगे भने २०० अमेरिकी डलरको टर्मिनेसन क्लव खडा गरे। संग शमूएल उमटी अविश्वसनीय भएको, क्लबले रमाइलो गर्न थाले बार्सिलोना को रक्षा मा अर्को प्रमुख टुक्रा को रूप मा Araujo.
रोनाल्ड अराउजो बायो - सफलता कहानी:
दुःखको कुरा, बार्सिलोनाको वरिष्ठ टीमका लागि पहिलो अक्टूबर २०२० मा पहिलो शृ note्खला नोटबाट सुरू भयो। सेभिला बिरुद्धको खेलमा जीन-क्लेयर तोडिबोलाई प्रतिस्थापित गरेको १ 2020 मिनेट पछि, अराउजोलाई सामना गर्न पिचबाट पठाइएको थियो Javier Hernandez.
एक सकारात्मक दिमागका साथ, उरुग्वेन स्टारले आफ्नो पहिलो अनुभव जिन्क्सलाई आफ्नो क्यारियरको बाँकी हिस्सा अनुमति दिइन। केही महिना पछि, रोनाल्ड कोमेन उनलाई २० 4२-२१ सत्रमा बार्सिलोनाको मुख्य टीममा सामेल हुने क्रममा नम्बर j जर्सी दिए।
यस अवसरमा उसको पकडमा, अराउजोलाई थाहा छ यो अहिले हो वा कहिले पनि सकारात्मक प्रभाव पार्ने छैन आफ्नो नयाँ टीम मा। मैले यो जीवनी सिर्जना गर्न प्रतिबद्ध भएझैं, गरीब आमाबुबाको केटा, जसको आमाले आफ्नो परिवारको पालनपोषणको लागि फ्राइड केक बेची, जनवरी २०२१ मा LaLiga गोल महिनाको जितेको छ।
हडताल हेर्नुहोस् जुन रोनाल्ड अराजोलाई ला लिगा गोल अफ दि महिना पुरस्कार जित्न मद्दत गर्‍यो।
कुनै प्रश्न छैन, अराउजो जो''6 उचाईमा उभिन्छन् एक शानदार डिफेन्डर हो। पिचमा, उसको दबंग उपस्थिति एक दृश्य हो। उरुग्वेलाई वास्तवमा धन्यबाद छ अन्तमा यसको उत्तराधिकारीको साथ डिएगो Godín। बाकि, जस्तै तिनीहरू भन्छन्, इतिहास हो।
के रोनाल्ड अराउजको केटीको प्रेमिका वा श्रीमती छ:
सुरुमा, उरुग्वे डिफेन्डरले अबी ओलिवेरा नामको सोशल मिडियामा पोष्ट गरेको महिलाको बारेमा फ्यानहरूको ध्यानाकर्षण गरे। सबैले सोचे कि उनीहरू प्रेमी हुन्। पछि, एक नयाँ खोजले सुझाव दियो कि अबी ओलिभেরা उसको परिवारको हिस्सा हुन्। अर्कोतर्फ, केही विद्यालय सोच्दछन् उनी रोनाल्ड अराउजको पूर्व प्रेमिका हुन्।
अबी ओलिवेरा को रोनाल्ड अराउजो को हो?
स्थिति निगरानी गर्दै - अझै पनि, २०२१ को सुरूमा हामी विवाहको फोटोहरूको अभावलाई देख्छौं। एउटा कुरा स्पष्ट भयो। तथ्य यो हो कि उसले आफ्नो नयाँ WAG प्रदर्शनमा खुशी लिन्छ। हामी के भन्न सक्दछौं त्यसबाट रोनाल्डको सम्भाव्य श्रीमती छ। उनी मोहित सुन्दरताको सुपर ब्लन्डी हुन्। उत्कृष्टको एक प्यारागोन उनको मान्छे को लागी एकदम उत्तम।
उनको जीवनको प्रेमलाई भेट्नुहोस्।
हामीले देख्यौं कि रोनाल्ड अराउजोको प्रेमिकाको ब्याज WAG को जस्तै छ फेडरियो Valverde। विशिष्ट हुन, तिनीहरू दुबै इन्स्टाग्राममा उनीहरूको प्रेम जीवनका कथाहरू साझा गर्न मन पराउँछन्। स्थानीय रिपोर्टमा यो पनि छ कि अराउजोले आफ्नो प्रेमिकालाई उसको आमा बुबामा परिचय गराए।
उनी रोनाल्ड अराउजोकी प्रेमिका र हुनकी पत्नी हुन्।
दुबै प्रेमीहरूले स्नेहको एक विशाल सार्वजनिक प्रदर्शन देखाउँदै गइरहेको कुराको आधारमा न्याय गर्दै, एउटा कुरा निश्चित छ। एक% 99% मौका कि उनी उनकी पत्नी र आफ्ना बच्चाहरूको आमा हुनेछिन्।
रोनाल्ड अराउजो निजी जीवन:
उरुग्वेनलाई पिचमा टेक्लहरूदेखि टाढा कसरी चिन्नुहुन्छ? सबैभन्दा पहिला, उहाँ एक भद्र साथी हुनुहुन्छ जसले उनको मुस्कानलाई व्यक्तित्वको बनाउने प्रतिबिम्बित गर्न अनुमति दिनुहुन्छ। चाखलाग्दो कुरा के छ भने, Araujo को नम्रता उनको प्रतिष्ठा पहिले। अझ महत्त्वपूर्ण कुरा, ऊ त्यस्तो व्यक्ति हो जसलाई प्रकृतिसँग हिँड्न रमाईलो लाग्छ।
उसको आत्म-प्रभावकारी व्यक्तित्वलाई धन्यबाद, मिडिया उसलाई जबरजस्ती डब गर्न बाध्य छ नम्र केन्द्र - फिर्ता - जसलाई म्याड्रिड चोरी गर्न सक्दैन। धेरै मानिसहरूले विश्वास गर्दछन् कि ऊ फुटबलमा यता आएको छ किनभने उसको नम्र शुरुवातको कारणले हो। सत्य यो हो कि रोनाल्डले कहिल्यै रिवेरालाई बिर्सदैनन्, जहाँ उनको परिवार आउँदछ।
रोनाल्ड अराउजो जीवनशैली:
२.2.9 मिलियन डलर (२०२१ तथ्या )्क) को वार्षिक तलब संगै, भैफलोले आफुको लागि एउटा विदेशी कार र महँगो घर किनेको छ। जब म यो बायो लेख्छु, अराउजो आफ्नो प्रेमिकाको साथ आफ्नो घरमा बस्छन्।
कहिलेकाँही, ऊ आफ्नो भावी पत्नीसँग फुटबल खेल्दा रमाइलो गर्दछ। साथै, उनको अनुमानित १ मिलियन डलरको नेट वर्थ बढ्न लागेको छ किनकि उसले स्पेनको सर्वश्रेष्ठ क्लबहरू मध्ये एकको लागि सुविधा जारी राख्छ।
रोनाल्ड अराउजो पारिवारिक जीवन:
कुनै शब्दले भावनाहरू वर्णन गर्न सक्दैन, हरेक चोटि उसले पूरै घरवाट पोखरीमा लैजाँदा झर्को अपहरणको दिनमा शान्त हुन। मनपर्‍यो लुकास टोररेरा, Araujo जीवन मा केहि भन्दा बढी आफ्ना आमा बुबा र भाइहरु लाई महत्त्व। यस सेक्सनमा, हामी तपाईंलाई उनको नम्र परिवारको प्रत्येक सदस्यको बारेमा वास्तविक जानकारी प्रस्तुत गर्नेछौं।
रोनाल्ड अराउजोको आमाको बारेमा:
कडा महिलाहरू स्थिर घर निर्माण गर्न अनिवार्य रूपमा जिम्मेवार हुन्छन्, र अराउजोको आमा पनि यसको अपवाद छैन। तीन केटाहरूलाई हुर्काउनु र एकै समयमा काम गर्नु उनको लागि सजिलो काम थिएन। उनी यस्तो प्रकार हुन् जसले आफ्नो प्रतिष्ठा अघि उनको बच्चाहरूको भविष्यलाई पहिलो स्थानमा राख्छिन्। सम्झनुहोस्, रोनाल्ड अराउजोकी आमाले आफ्नो परिवारलाई टेवा पुर्‍याउन फ्राइड केकहरू बेचेकी थिइन्।
बाल्यावस्थाका दिनहरूमा पनि, उनकी बुद्धिमत्तामा उनकी आमाले यस युवालाई एकेडेमीमा भर्ना गर्ने सुझाव दिइयो। धन्यबाद, उनको विचार उनको केटा एक करोडपति मा परिणत भएको छ।
रोनाल्ड अराउजो बुबाको बारेमा:
उसको छोराको ख्याति दिन प्रतिदिन बढ्दै जाँदा, सुपर बुबाले कम्प्रोलर जनरलको जीवन छनौट गर्नुभयो। निस्सन्देह, त्यो के गर्नुपर्छ। आफ्नो नम्र व्यक्तित्वको साथ, अराउजोका बुबाले प्रायः उनको छोरालाई आर्थिक र नैतिक दुवै समर्थन गरे।
धेरै जसो, उसले आफ्नो छोरालाई अरू कुनै पनि काममा परमेश्वरलाई प्राथमिकता दिन प्रोत्साहन दिन्छ। हुनसक्छ डिफेन्डरको धार्मिक विचारधारा उसले आफ्नो बुबाबाट सिकेका सबै पाठहरूको प्रतिबिम्ब हो।
रोनाल्ड अराउजोका भाई बहिनीहरूको बारेमा:
दुई छुट्टै भाइबहिनीसित हुँदा उसले आफ्नो बिदामा बिताएको छ। उनका भाइबहिनीहरूमध्ये केवल एक (माइकेला) परिवारमा अर्को फुटबल स्टारको रूपमा उभिन्छ। मैले यो बायो लेख्दा, माइकेलाले पहिले नै स्थानीय क्लबको साथ युवा फुटबलमा छालहरू बनाउँदैछ।
रोनाल्ड अराउजोका आफन्तहरूका बारे:
उनको ख्याति बढेको पछि, मिडियाले आफ्नो हजुरबा हजुरआमाको अस्तित्व प्रति आफ्नो जिज्ञासा खोज्न सकेको छैन। यद्यपि हामीले पत्ता लगायौं कि त्यो जवान बच्चा आफ्नो हजुरआमाद्वारा प्रसिद्ध उरुग्वे पेय - बिटर म्याटमा परिचित भएको थियो।
रोनाल्ड अराउजो अनटोल्ड तथ्यहरू:
हाम्रो टेकररको जीवन कथा उदाउनको लागि इमर्जिंग सेन्टर-ब्याक यहाँ छन् केहि अस्पष्ट तथ्यहरू तपाईलाई थाहा थिएन यसले तपाईको जीवनीको पूर्ण ज्ञान प्राप्त गर्न मद्दत गर्दछ।
प्रति वर्ष € 2,883,305
प्रति महिना € 240,275
प्रति हप्ता € 55,363
प्रति दिन € 7,909
प्रति घण्टा € 330
प्रति मिनेट € 5.5
अनुसन्धानले देखाउँदछ कि एक औसत उरुग्वे नागरिकले ack बर्ष सम्म काम गर्नुपर्नेछ कि टेकलरले एक महिनामा प्राप्त गर्छ।
जब देखि तपाइँ हेर्न शुरू गर्नुभयो अराजुको बायो, यो उसले कमाएको हो।
ट्याकलरले लिने हरेक चरणमा ऊ सधैं भगवानलाई सम्मिलित गराउँछ। विश्वासका साथ एथलीटको बारेमा कुरा गर्नुहोस् र अराउजो जहिले अगाडि हुन्छन्। उसले आफूले हासिल गरेको कुनै पनि गोलको लागि परमेश्वरलाई महिमा दिनको लागि तयारी गर्छ। सायद ऊ पछिका पदहरू अनुसरण गरेर खुसी भएको हुन सक्छ एडिसन काभनी जब यो आउँदछ उसको विश्वासको सवालमा।
तथ्य # 3: गरीब फीफा तथ्या :्क:
अराउजोसँग अझ धेरै लामो बाटो बाँकी छ उसले आफ्नो प्रतिरक्षात्मक स्वभावलाई पूर्ण गर्न भन्दा पहिले डिएगो Godin। उसको समग्र मूल्या rating्कन घरको बारेमा लेख्न केहि पनि छैन जब उसको खराब सम्भावित रेटिंग्सको हालको मूल्या rating्कन बराबर छ लुकास टोररेरा। यो रोनाल्डलाई फिफालाई गलत प्रमाणित गर्न चुनौती छ।
ओभरटाइम, अराउजोले प्रमाणित गरेको छ कि जादूको माध्यमबाट सपना वास्तविक हुँदैन। बरु, यो पसीना, दृढ संकल्प, र यो प्राप्त गर्न कडा परिश्रम लिन्छ। यसमा कुनै अचम्म छैन कि उसले प्रशिक्षण सत्रहरू र खेलहरूमा उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्दछ।
हामी आज सम्म उनको बाल्यकाल देखि उनको क्यारियर प्रगति देखरेख मा आफ्नो आमा बुबा को साहसी प्रयास को सराहना गर्दछौं। र, एक तथ्य यो छ कि उसका एक भाइ उस्तै उस्तै सपनामा हिडिरहेका छन् आफ्नो परिवारको लागि ठूलो जीत हो। हामी आशा गर्दछौं कि उनीहरूले भैंस जस्ता महानता प्राप्त गर्नेछन्।
धन्यवाद उभरते केन्द्र को जीवनी कहानी पढ्न को लागी धन्यवाद। कृपया हामीलाई टिप्पणी सेक्सनमा उहाँमा आफ्ना विचारहरू साझेदारी गर्नुहोस्। त्यस्तै गरी, विकी तालिकामा उसको बायोको सारांशमा स्किम गर्नुहोस्।
पुरा नाम: रोनाल्ड फेडरिको अरौजो दा सिल्भा
जन्मस्थान: रिवेरा, उरुग्वे
पिता: N /
आमा: N /
Siblings: दुई भाई (मैकेला अराउजो)